SIRQARINTA BEERISTA GUULEYSTA EE ARUGULA ON WINDOWSILL: TALOOYIN WAX KU OOL AH EE BILOWGA AH - DHIRTA BASBAASKA LEH
Ugu Weyn Ee Dhirta basbaaska leh
Koritaanka arugula ee wareegga daaqsinka sannadka
Talyaanigu ma metelaan cuntooyinkooda iyaga oo aan lahayn arugula, annaga oo kaliya ayaa dhawaan uun soo baxday oo cagaaran oo qaali ah.
Maanta waxaad ka iibsan kartaa dukaanka, waxayna noqoneysaa mid caan ah.
Arugula oo salad ah oo saliideed leh oo salad ah ayaa hadda lagu kori karaa iyada oo aan dhibaato lahayn daaqadaha guriga dhexdiisa.
Sidee arugula waxtar leh
Indau, Eruk, Caterpillar iyo Arugula - magacyada mid ka mid ah dhirta, eruki laga beerto qoyska kaabash. Tani waa dhaqan saladh aad u caadi ah oo ku yaal Mediterranean. Caleemaha jilicsan ee arugula waxay leeyihiin dhadhan, dhadhan yar oo jilicsan iyo dhadhan roodhaf ah. Waxaa loo isticmaalaa salad, cunto yaryar, suugo, maraqa.
Arugula waa hodan ku salaysan fitamiino (E, B, C, A, K) iyo macdan (zinc, magnesium, selenium, sodium, copper, fosfooraska, manganese, birta). Sababtoo ah ka kooban tan, waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan metabolism, adkeynaya derbiyada xididdada dhiigga, kordhiya hemoglobin, waxay xoojisaa nidaamka dareenka.
Arugula waa waxtar u leh dadka qaba cudurka macaanka iyo cayilka. Iyada oo ay sabab u tahay heerka kalooriga yar iyo qaabka faa'iido leh, waxaa loo isticmaali karaa nafaqada cuntada. Sidoo kale arugula wuxuu ka caawiyaa hagaajinta hawlaha ilaalinta, waxay hagaajinaysaa dheefshiidka, tones jirka. Warshad waxaa loo tixgeliyaa aphrodisiac xoog leh.
Si arugula ay u faa'iideystaan ​​jirka iyo waxyeelada ayaa ah mid aad u yar, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato xadidaadaha qaarkood. Waa in loo adeegsadaa taxadar dadka qaba xanuunka caloosha, kelyaha iyo beerka ee u nugul xasaasiyadaha. Fikradaha waxay ku kala duwan yihiin haddii arugula uu uur leeyahay: Dhinaca kale, waa kaydka nafaqooyinka, dhinaca kale - xasaasiyad macquul ah.
Ma taqaanaa? Arugula waxaa sidoo kale loo yaqaannaa mulkiil (magaca Faransiiska), saliida salad, arugula (magaca American).
Dooro noocyo kala duwan oo arugula ah oo ku sii kordhaya windowsill
Marka aad go'aansato inaad koraan arugula daaqada daaqadda, talaabada koowaad ee tani waxay noqon doontaa iibsashada abuurka. Waxaa laga iibsan karaa dukaanka khaaska ah, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dhirta qaangaarka ah aysan noqon karin gebi ahaanba arugula.
Magacatan waxaad ka heli kartaa abuurka laba dhirta ee qoyska kaabashka (Cruciferous) - Indow beerto (Eruca sativa) iyo laba-saf oo ganaax ah (ama laba-labbo dhuuban, Diplotaxis tenuifolia). Warshad labaad ayaa sidoo kale loo yaqaan "arugula duurjoogta ah", ma aha mid beeran, laakiin waa la koray oo loo adeegsaday cunto weheliya arugula caadi ahaan.
Waxaad kala saari kartaa muuqaalka: Caleemaha Indauku waxay leeyihiin dhinacyo ballaadhan oo qallafsan iyo caddaan, caddaan iyo casaan leh ama ubaxyo caan ah oo leh xididdada guduudka; labada-safaradu waxay leeyihiin dhaadheer, cidhiidhi ah, caleemo adag oo laga gooyey, ubaxyo jaale ah ama jaale ah.
Noocyada ugu horreeya ee arugula Koltivata, Rococo, Poker iyo arigula dabaasha ah laba-lakin Solitaire ayaa laga yaabaa inay ku farxaan cagaarka cusub 20-25 maalmood ka dib marka la furo. 30-35 maalmood, noocyada dhexe ee Bisaylkiisa ee Corsica Corsica iyo Sicily, iyo sidoo kale labada Rocket iyo Euphoria, dhalid.
Waa muhiim! Ilaa 2009, labadaba Euphoria, Taganskaya Semko, Solitaire iyo Roobo oo kala duwan oo caan ah ayaa lagu soo bandhigay Ruushka waxay ku qoran yihiin Diiwaanka Geeddi-socodka Horumarinta ee Ruushka oo ah noocyada kala duwan ee beeritaanka. Qaladku waa la taagay, laakiin jahawareerku weli wuxuu ku dhacaa meelo badan.
Waxaan dooran karnaa awoodda dhulka
Arugula on daaqada si weyn u kori kartaa weel kasta: in sanduuq alwaax ah, saxaarad caag ah, dhoobo ubax, koob. Haddii aad rabto inaad dhisto beer beerta yaryar ah, waxaad u baahan doontaa awood weyn, laakiin xaalad kasta waa in ay qoto dheer tahay 10-12 cm.
Caarilka arugula sii kordhaya
Ka hor inta beerto abuurka arugula, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso isku dar ah ciidda. Warshadu maaha mid si gaar ah ugu baahnaayo hannaanka carrada. Habka ugu fudud waa inaad iibsato ciidda diyaar u ah, universal ama geedo, oo ku jira nitrogen iyo fosfooraska.
Laakiin haddii aad rabto inaad wax walba sameyso, Qaado 2 qaybood oo ah dhul sodan, 2 qaybood oo humus ah iyo hal qayb oo ciid ah. Haddii dhulka waa mid aad u acidic, waa in lagu qaso lime.
Taangiga, waa in aad marka hore gashato lakab oo dhoobo ah dhoobo, dhagaxyo ama lebis jaban, sidaas darteed qoyaan xad dhaaf ah ayaa daadi kara. Ciidda taangiga waa in lagu buuxiyaa height ah ugu yaraan 6-7 cm.
Waa muhiim! Wixii beerista arugula ee guriga waa dhul aad u fiican oo ay ku koraan digirta ama dalagyada dalagyada. Ka hor intaadan isticmaalin, waa in lagu kariyaa foornada si loo ilaaliyo sprouts mustaqbalka cudurada iyo cayayaanka.
Beerista ariga sooman
Arugula waxaa lagu dhufan karaa kolla daaqada adoo koraya abuurka. Ha ku qoynin.
Ciidda diyaarisay ee taangiga ayaa qoyan. Seeds waxaa lagu beeray safo fogaan ah 3 cm ama ceelasha 2 pc. Tan kor ku xusan, miraha waxaa lagu rusheeyaa lakab (1-1.5 cm) oo ciid ah, qoyaan biyo diirran oo dhalada ka dhalaalaya oo ku daboolan dhalada ama filimka (tani maaha daruuri, biqilka ayaa ku filan heerkulka qolka, sprouts 16-18 ° C muuqata 5 maalmood).
Xaaladaha geedka abuurka
Ka dib markii la beero, waxaan ku ridaa weelka ku dhow batoonka kulaylka ama isla markiiba kolla daaqada. Haddii uu jiro hoy dheeraad ah, mar mar waa in laga saaraa hawada. Carrada waxaa lagu qasi karaa atomizer. 3-7 maalmood kadib, caleemaha kowaad waxay u muuqdaan. Uma baahnid hoy ammaan ah, sanduuqa waxaa loo wareejin karaa meel joogto ah. Ma aha lagama maarmaan in la quudiyo geedka substrates kiimikada, waxay qaadan doontaa wax kasta oo ay uga baahan tahay ciidda.
Daryeelka Arugula ee guriga
Daryeelidda dhirta daaqadaha waa sahlan tahay. Waxay u baahan yihiin waqti keliya oo biyo ah.
Waraabinta joogtada ah
Arugula on windowsill koraa casiir leh, ku xiran tahay timaadda iyo waraabinta haboon. Iyadoo la'aanta caleemo qoyan waxay noqon doontaa mid aad u qadhaadh.
Inta badan ee waraabinta waxay ku xiran tahay qoyaanka ciidda. Ciidda ku jirta dheriga waa in aysan qalajin. 10ka maalmood ee ugu horreeya, ciidda waa inay ahaato wax qoyan, waa in la waraabiyaa mar labadii maalinba mar. 20ka maalmood ee soo socda waa in si fiican loo waraabiyaa maalin kasta. 30 maalmood ka dib, waraabinta waa inay noqotaa mid dhexdhexaad ah iyo maalin kasta.
Barkad yar oo leh sprouts waa in la helo badan oo iftiin ah. Xasuuso in haddii daaqadaadu aanay ku jirin dhinaca qorraxda, iftiinka noocan ah ee arugula waa mid aan ku filnayn.
Xaaladdan, ha ahaato iftiin macquul ah. Nalalaha fluorescent ayaa lagu dhejin karaa fogaan ah 50-60 cm oo ka sareeya caleemaha. Waa in la qaato maalintii oo dhan cimilada calool-xumada, saacado yar oo jiilaalka ah.
Waa muhiim! Ha shidin nalalka. Arugula wuxuu u kori karaa dherer iyo dhuuban.
Goynta: jarida caleemaha arugula
Arugula dusiga ayaa siin doona goosashada ugu horreysa qiyaastii bil kadib beerashada. Waa la qaadi karaa marka caleemuhu gaadho dherer 10 cm. Sida loo baahdo, isla markiiba ka hor isticmaalka, caleemaha shaqsi ayaa la jaraa ama la rujiyaa. Haddii aad u sameysid si siman oo siman, waxaad ku raaxeysan kartaa dhadhanka jilicsan ee arugula ee jikadaada illaa 45 maalmood.
Ma taqaanaa? Kala duwanaansho cagaaran caleenta cagaaran ee "Pesto" oo ku salaysan arugula waxaa lagu diyaariyey in lagu daro toonta, looska, saliidda saytuunka, parmesan, milix iyo basbaas.
Koritaanka arugula ee windowsill waa jimicsi aan u baahnayn kharashyo waaweyn iyo mid jireed, laakiin natiijada qaabka dalagga ubaxu udubdhexaadku ma qaadanayo muddo dheer si ay u noqdaan oo noqon doonto qayb qurux badan oo loogu talagalay sheekooyinka culimada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta basbaaska leh 2019